Ngenxa ezicindezelayo ekuphileni kwansuku zonke futhi hhayi ngaphansi matasa ngempelasonto, abantu abaningi abanayo ithuba uzibixe imisebe. Ngakho-ke, solarium sekuyisikhathi eside enye yezinto evamile kulabo ujabulele amahle ngisho tan.
Abantu abaningi bayazibuza ukuthi ingabe ungasebenzisa solarium e lingerie. Yiqiniso, kungenzeka, konke kuncike okuthandwa isivakashi kule ndaba. Uma intombazane noma umuntu osemusha ofuna Tan kwaba emzimbeni wonke, izingubo kangcono ukususa. Nokho, lokhu akudingekile. Ngakho kungenzeka ukusebenzisa solarium elondolo? Yebo. Futhi abantu asebavele iminyaka engu-30, khona izingubo Kunconywa ukuze sivikeleke olubucayi.
Ngakho, ake sithi ukushaywa kuhlelwe solarium okokuqala. Indlela Tan kahle? Ngubani oyolandisa, kodwa kuqala ukubheka izinzuzo le nqubo.
Yiziphi izinzuzo solarium?
Inzuzo enkulu solarium - a unyaka wonke ukutholakala. Kulula kakhulu ukuthi ubhalisele i-amaseshini amaningi uvakashele kulesi sikhungo, kuka undize uye sunbathe emazweni ashisayo. Ikakhulukazi ukuthi amaholide phesheya ezibizayo kakhulu, ngakho solarium ikhambi ephelele kubantu abafuna babukeka ezishukiwe unyaka wonke.
Ngenxa imisebe ultraviolet, okuyinto isinyathelo umuntu phakathi ukushuka kweseshini, umzimba uqala ukuba ukhiqize uvithamini olujulile D. Sekuyisikhathi eside kungase kutholakale ukuthi solarium kuvimbela izifo kumuntu ezifana kwamathambo. Iza njengomngani ngenxa yokuntuleka calcium emzimbeni, esiza ukunikeza umuntu kavithamini D.
Ukugcwaliseka yonkhe imitsetfo ledzingekako ukushuka efanele, kuvimbela isikhumba induna kanye psoriasis. Ngaphezu kwalokho, imisebe ye-UV bayakwazi ukuvimbela nezinwele futhi ukuvikela umuntu umfutho ophezulu wegazi.
Unyaka wonke solarium inikeza isivikelo ezifweni bulimaza imigudu yokuphefumula kubantu. Iqiniso lokuthi imisebe ultraviolet bangambulala amagciwane. Ngakho-ke, lo muntu eba evikelwe ngokuphelele. Okwakubaluleke ngokukhethekile iba phakathi kubhubhane, okuyinto zenzeka njalo kunazo zonke offseason.
Solarium nethonya elihle wonke umzimba. Kahle inqubo olwenziwa kunganciphisa, futhi ngezinye izikhathi ngisho asuse igridi capillary ungaveli izinyawo nezandla.
ukushuka Artificial uyakwazi kuvuse i-hormone umzimba obangela ajabule. Ngakho ukuthi solarium akuyona kuphela kuba nomphumela omuhle empilweni, kodwa futhi kukusiza ukuba ajabule.
Ngaphambi kokuvakashela yiya kudokotela
Akufanele singayinaki iseluleko ochwepheshe. Endaweni yokuqala kufanele avakashele cosmetologist futhi wesikhumba ngubani kungacacisa ukuthi noma ngabe solarium ukulimaza isikhumba. Kanti futhi, abantu imithi oyiphuzayo kufanele ngaso sonke isikhathi ukuxoxa nodokotela ngaphambi kokuba uya solarium.
Abesifazane abakhulelwe lactating kudingeka futhi baqonde ukuthi kufanele uyeke ku-tan yokufakelwa. Okunye Izimo:
ubudala ezingaphansi kweminyaka engu-15,
izinkinga isibindi, inhliziyo futhi izitho zokuphefumula.
Solarium ngaphandle kwemvume udokotela kungaba kuvuse okubi kakhulu lesi sifo. Ngakho-ke, umuntu ngamunye kufanele ayeke ukushuka ngenkathi kuvinjelwa odokotela.
Idumela izikhungo - esibalulekile kukhethwa
Kungcono ukukhetha ilanga emphemeni nge idumela elihle. Bonke abasebenzi kumele bazi ukushuka ilungile futhi ukwazi ukudlulisela lolu lwazi izivakashi. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe professional ziyadingeka ukuze alungiselele umuntu ngamunye uhlelo ngabanye ukuvakashelwa solarium, okuzokwenza acabangele yobudala kanye uhlobo isikhumba iklayenti sika.
Lokunye lokubaluleke kakhulu izinga izibani ukufakwa solarium. Ngakho-ke, izikhungo uyayazisa idumela yabo, happy njalo ukunikeza zonke izitifiketi eqinisekisa izinga okusezingeni imishini. Iqiniso lokuthi isibani ishintshwa njalo, kungenjalo ukushuka session uyakwazi ukulimaza isikhumba emhlabeni umzimba womuntu.
Indlela Tan endaweni solarium? Imithetho nemihlahlandlela
1. Ukuvikelwa umzimba okugunyaziwe. Okokuqala, kubalulekile ukuba ufihle izinwele zakhe ngaphansi isigqoko noma isikhafu ukuqinisekisa ukuthi musa Ewufrathe out. Okwesibili, qiniseka ukuvikela izinhlaka umbono, ukuze ibekwe izibuko ezikhethekile. Kubalulekile ukuvikela izindebe, kubenze namafutha. Okwesithathu, kufanele ususe konke ubucwebe umzimba, futhi ukucabanga kusengaphambili mayelana indlela ukushuka. Kungenzeka yini ukuba usebenzise solarium elondolo? Yebo. Uma phakathi nesimiso, iklayenti kuzoba izingubo zakhe, khona-ke kumelwe nakanjani kube ithungwe ngendwangu engokwemvelo. Uma kungenjalo, khona-ke kumelwe bathenge Stikine (amapuleti alahlwayo) ukuthi ukuvikela izingono. Ephambi kwezinduna Tattoos emzimbeni basuke Kunconywa ukuba baziphathe ngezindlela ezikhethekile.
2. ukulungiselela Proper kwesikhumba. Ngaphambi ukushuka abakwazi ukuya sauna namabhati, kanye ukugeza ngensipho. Ngaphandle-ke asivunyelwe ukwenza izinwele ukususwa, eliphathisa, awukwazi ukusebenzisa okhilimu, amanzi yangasese, amafutha kanye deodorants. Kungcono ushawa ngaphambi kokuya salon, usebenzisa Foam mnene ukubhukuda. Wena ubuye akufanele uvakashela solarium makeup, njengoba ngaphansi kwethonya izimonyo UV kungabangela komzimba. Ngaphambi kokuthi uqale kweseshini ukushuka, qiniseka aphathe lo muthi isikhumba, okuyinto yakhelwe ukushuka zasendlini.
Ikakhulukazi isikhumba ukuthi kufanele kubhekwe uma uvakashela solarium
Thina esiphethweni kanjani ukusebenzisa solarium. Imithetho ukuthi siye ezichazwe ngenhla, ukuyichaza ngokuningiliziwe zonke izici. Kodwa kudingeka ukhulume Yeshe nezici kwesikhumba.
Bonke abantu kwehlukile. Ngakho-ke, yilanga angaya umuntu ngamunye msinyana nofana buthaka. izinhlobo:
isitayela Mediterranean - ngokwayo amnyama isikhumba ithoni, freckles wakhe bengekho nhlobo. Ukushiswa yilanga abantu abanesikhumba enjalo ngokushesha okukhulu uwela;
uhlobo amnyama European. Tan ngokushesha ngaphandle kokwesaba ukuguguleka komhlabathi, can abantu abanesikhumba umthunzi kancane ebumnyameni;
European ukukhanya hlobo. Abantu abanale isikhumba eyanelisako ngaphandle freckles, uthambekela ukuguguleka kwenhlabathi. Ngakho-ke, kufanele kuncishiswe isibalo amaseshini isikhathi sabo;
uhlobo Celtic. Uma umuntu has a lot of freckles, futhi ibala Uphaphathekile pink ke Ukuvakashela solarium kungathikameza kabi isimo dermis. Isikhumba kungenzeka bomvu futhi ngosile ngokusebenzisa, ngakho-ke okhokhela qaphela yokufakelwa tan.
Manje ngoba sewuyazi ukuthi indlela ukuze uthole tan abaphelele ngezinga solarium. Izimfihlo tips okuye ochazwe esihlokweni esithi eyokusiza ukuba ufinyelele wayefisa. Siphinde esiphethweni kanjani ukuba amantombazane tan nezinhlobo isikhumba ezahlukene. Nokho sazi izimpendulo embuzweni okuthakazelisayo ukuthi ukusebenzisa solarium e lingerie. Njengoba ubona, kungenzeka, futhi abanye abantu ngisho kudingeka ukuze sivikeleke.
Indlela ukuhlanza umuntu ekhaya, ukuthola imiphumela esiphezulu
Indlela ukuhlanza ezimbotsheni ekhaleni ekhaya?
Knotweed Giant. Lesitshalo nemibandela ezikhulayo
Loan Cash "Uralsib" ebhange: Isikweletu "wabo" cash ngaphandle izimo zokuphepha imvume
"Uthando ezingalindelekile wayeza" - abadlali langa melodrama Russian
Expedition kuyi-Mars. Lolu hambo ngowokuqala Mars
Indlela yokupheka i-pate ye-eggplant?
Sekugcineni yangaphandle yendlu ngokhonkolo evundile: ongakhetha amathiphu